Agaasimaha Shirkadda DP World: Nama qusayso hadalka kasoo yeeray Dowladda Federaalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Agaasimaha Shirkadda DP World: Nama qusayso hadalka kasoo yeeray Dowladda Federaalka Soomaaliya
DUBAI – Agaasimaha guud ee Shirkadda DP World Suldaan Ahmed Bin Suleymaan ayaa ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in heshiiska Saddex geesoodka Dekeda Berbera uu ahaa mid sharci darro ah.
Suldaan Ahmed Bin Suleymaan ayaa sheegay in hadalkaas uusan qusayn isla markaana ay Somaliland tahay dowlad madax banaan.
Nama quseeyo waxa ay leedahay dowladda federaalka, somaliland waa dowlad madax banaan 28 sano, waa meel xasilooni oo dimoqraadiyad ka jirto, mashruuceena wuxuu helay ogolaanshaha baarlamanka somaliland, ma awoodi karto inay xukuumadda Federaalka wax bedesho ama hadalo ay jeediyaan oo aan u joojineyno ma jirto..”ayuu yiri Suldaan Ahmed Bin Suleymaan.
Waxa uu sheegay in xilka ka saaran mashruucan uu yahay sidii ay u ilaalin lahaayeen iyaga iyo kuwa saamiga leh ee Somaliland iyo dowladda Itoobiya.
Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa si kulul uga soo horjeesatay heshiiska dekedda Berbera ,waxayna ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan haba yaraaree waxba ka jirin.
Dowladda Soomaaliya ayaa u digtay shirkadaha maalgashiga ee aan soo marin hay’adaha Dastuuriga in sharciga lala tiigsan doono.
Shirkadda DP World ayaa khamiistii lasoo dhaafay heshiis saddex geesood ah ee ku saabsan saami qaybsiga Dekedda Berbera ku kala saxiixday magaalada Dubai,heshiiskaas ayaa dhigaya in Somaliland hesho 30%,halka Itoobiya ay helayso 19%,shirkadda DP World ay helayso 51%.